Fitanana an’i Mamy Rakotoarivelo : mikorontana ny FAT, tsy sahy mandray andraikitra ny fampanoavana ! (+ video) – MyDago.com aime Madagascar
lapan'ny Fitsarana Anosy 19 Martsa 11
Araka ny vaovao niely dia tokony hiakatra « parquet » androany Sabotsy 19 Martsa 2011 i Mamy Rakotoarivelo momba ilay raharaha fanapoahana baomba tetsy amin’ny Marais Masay. Vao maraina dia efa rakotra vahoaka ny lapan’ny Fitsarana Anosy, niandry izay ho tohin’ity raharaha ity.Hatramin’ny mitatao vovonana anefa dia fantatra fa tsy raikitra indray izany. Araka ny fanazavan’ny mpisolo vava azy, Me Hanitra Razafimanantsoa dia mbola tazonina etsy amin’ny BC Anosy izy amin’ity faran’ny herinandro ity, raha efa eny amin’ny fonjan’Ambatolampy kosa i Misa sy Tsimba ireo nitsangana ho vavolombelona niapanga ny Sekretera Jeneralin’ny antoko TIM.Araka ny tsilian-tsofina heno dia miteraka disadisa eo anivon’ny mpitondra FAT ity raharaha ity, be dia be ireo tsindry sy teritery mandeha momba izany. Tsy sahy mandray andraikitra ny fahefana mahefa,mifanilika andraikitra ny DST sy ny Zandary,miraviravy tanana ny Polisy,mihainohaino ny Fampanoavana, inona ny antony? ny ampitso no hamaly izany.
Jereo eto, Photos Lapan’ny fitsarana Anosy 19/03/2011, miisa 10.
Matahotra hitsara an’i Fetison, Zafilahy, Edouard i Rakrisy ?
Auteur Solo RazafyPublié le 19 mars 2011 20 mars 2011 Catégories Malagasy, Politique, Vidéos
2 pensées sur “Fitanana an’i Mamy Rakotoarivelo : mikorontana ny FAT, tsy sahy mandray andraikitra ny fampanoavana ! (+ video)”
Valiny: satria efa manomboka matahotra ny zavatra fanaony ireo foza orana sasany. Re hatrany ivelany mantsy ny fofon’ny dikiny, ka tsy sahy mihetsika mafy intsony rizareo, satria raha vao mananga-tànana, dia heno be ny fofo-kelika!
Ha!Ha!Ha!Ha! Ha! Ha
Hoatran’izao ihany koa no nitranga mikasika ny nanjoa an’i Fetison sy Zafilahy ary Pastera.
Tamin’ireto farany aza dia nisy fotoana nanjavona tsy hita hoe aiza ireto olona, naodinkodindry zareo tany Fianarantsoa (Pety na Organes no tao ambadika?), ny olona sendra nandalo no nilaza nahita azy teny antsapanana – anaty fiara avy – any Vatomandry indray!
Izao dia ren-tany ren-danitra avy t@ ireo olona akaiky ireto VOATERY nanao vavolombelona SANDOKA, voatery nanao noho ny TORTURE natao azy ireo.
Torture fampiasan’ireo tany Communista taloha – ny Nazin-dry Hitler – ry zareo MAFIA.
TONGA ANY AMBOVONAN-dra France ny zava-miseho marina nohon’ny fisian’ny vavolombelona hita nofo sy ren’ny sofina!
Dia mbola midingin-drambo ihany ingahy Ratsirahonana : mpamoaka lalàna fiarovana ny MALOTO sy ASA MAIZINA rehetra notanterahina sy tanteraky ny mpomba ny HATay hatr’izay ka mandrak’ankehitriny, eto amin’ny tany , ny firenena sy izay olona mijoro manohatra ny hevitry ny FATin’alika isany
DIA INONA INDRAY ZAO NO FORONIN’IREO RAHAMPITSO?
Précédent Article précédent : Matokisa fa miara-dia aminareo hatramin’ny farany aho hoy Pr Zafy Albert ! (+vidéo 2)
Suivant Article suivant : Video Toko Be Telo, Magro 19/03/2011